Xi'an Si Aad Ula Socoto Guusha Shenzhen - Alietc.com
Samiira Hassanzadeh April 3, 2021 0 comments
Madaxbanaanida Shiinaha ee tikniyoolajiyadda ee qorshaheeda horumarineed waxay muujineysaa ujeedkeeda: in lagu ballaariyo aagagga tiknoolajiyada soohdinta. Ka dib markii uu ku guuleystey teknoolojiyada shirkadda Huawei iyo Tencent Holdings ee gudaha, Shenzhen waxay tusaale u noqotay magaalooyinka sida Xi'an.
Xi'an, oo ah magaalo weyn oo sii kordheysa sanadka 2020, waxay qaaday talaabooyin adag oo lagu horumarinayo guulaha wax soo saarka semiconductor iyo warshadaha diyaaradaha, iyo kuwo kale.
Hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda ayaa ugu sarreysa ajandaha qorshaha horumarinta, Duqa magaalada Li Mingyuan ayaa sheegay dhowaan.
Ganacsiyadu waxay ku xisaabtamaan qaybta ugu weyn ee Shenzhen, in kasta oo Xi'an ah. Qu Jian, oo ah maamule ku xigeenka machadka horumarinta Shiinaha ee fadhigiisu yahay Shenzhen, oo sii hadlaya ayaa yidhi mid kastaa wuxuu u baahan yahay inuu dejiyo halka uu ku wajahan yahay; suuquna waa inuu si aad ah uga qayb qaataa haddii Xi'an doonayo inuu raaco raadka Shenzhen.
Si loo dhiirrigeliyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee Xi'an, kuwa aan dawliga ahayn iyo ganacsiyada shisheeye ayaa door weyn ka ciyaara, ayuu raaciyay Li. Wuxuu si sharaf leh uga hadlay Longi Green Energy Technology oo uu ku tilmaamay inay tahay soo saaraha ugu weyn ee warshadaha silikon ee ku jira monocrystalline adduunka.
# Gobonimada Shiinaha
# farsamada casriga ah